Waxii Doorashada Inaga Qaldamay Ma La Saxi Karaa? | Somaliland Today
← Dawladda Hoose Ee Dalku Waxay U Baahan Yihiin In La Kala Diro.
Xeer-Nidaamiyaha Dhismaha Xukumada: Kaalintiisa Iyo Sharcinimadiisa. →
Waxii Doorashada Inaga Qaldamay Ma La Saxi Karaa?
Waxaan goob joog u ahaa olalihii iyo doorasha Madaxtooyada Somaliland. Waxaana qirayaa in doorashada madaxtooyada ay ahayd doorasho xor ah xalaala. Waxaana qabaa in doorashda Somaliland ka dhacday ayna ka dhicin dalal badan oo afrika ah oo aqoonsi iyo dhaqaalo badan haysta.
Haddana, lama odhan karo sida doorashada u dhacday waxba kama qaldanayn. Waxaan qalinka u qaatay in waxa ka idhaahdo siddii loo saxi lahaa qaldaadkii yaraa ee dhacay, si doorashada soo socota ay ka sii fiicnato doorashadani isla markana cidna ku marmarsoon waxbaa la is daba mariyay.
Doorasho kasta oo
dhacda si boqolkiiba boqol ahi (100%), calamka melena kama dhacdo. Lakiin sidaynu u yarayn lahayn qaladaadka iyo muranka doorashadu waxay dan u tahay dhamanteen, waxayna soo dhawaynaysaa Ictiraafka muda dheer aynu u dabranahay.
Haddaba, haddii aan is dul tago meelaha aan is leeyahay waxay u bahan yihiin in horumar lagu sameeyo waxa ka mida:
1) Waci galinta cod bixiyayaasha
Telefishada iyo radiyaha Somaliland waxa laga sii dayn jiray wacyi galimo dadka loogu barayay sida u-codayn lahaayeen. Haddaba, dadka codaynaya badankoodu telefishino iyo radiyaha ma dhagaystan. Sida daraadeed, waxay ahayd in la hawl galiyo dhalin-yaro albaabada ku garacayan xafadaha dadku degan yihiin. Doorashadani waxa jiray dhalin-yaro ka socday xusbiyada qaarkood, oo olalaha iyo wacyi galin is dhex waday, kuwasi oo albaabada garacayay. Haddaba, sida oo kale waa in komishanka qaranku ay qortan dhalin yaro dadka wacyi gala.
Doorashada Golaha Wakiilad iyo Degmooyinku waxaa isa sharaxaya musharaxiin badan, tasina waxaa sahlaysa in musharax kasta uu wacyigaliyo tageeriyaashiisa.
2) Shaqalaha doorashada goobaha codaynta
Doorashada Madaxtooyada waxaa laga codaynayay 1,642 goobood. Goobkastana waxaa ka hawl galayay ugu yaran 4 shaqalaha doorashada ah ama in ka badan 1,800 shaqalo doorashad oo ka wakiila ah Komishanka Qaranka.
Cabashooyinka aan maqlay waxaa ka mida ah, in shaqalaha doorashadu u badnaayeen dhalinyaro aad u yar-yar, oo jamacada ku jira oo aqoon iyo wayo aragnimo ay shaqadani ku qabtan aan lahayn. Sida daradeed waa in doorashadani ay inoo noqto cashar aynu ku saxno qaladaadka dhacay.
Gobalkasta waxaa ka jirta jamacado lagu tababari karo shaqalaha doorashada. Waa in doorashada ka hor, mudo bill ama laba bilooda la siiyo casharo la xidhiidha hawshani ay qaranka u qabanayaan. Casharadani lagu barayo:
Qofka shaqalaha doorashada noqonayaa waa in la fahamsiiyo hawsha uu qabanayaa in ay tahay hawl qaran, una guto si wadaninimo ku jirto. Sida daraadeed, waa in ay fahanman waxa ay wadaniyadu tahay, waana in la baro Dastuurka iyo sharciyada dalka ee la xidhiidha doorashada.
Hogaaminta (ama leadership).
Qofka shaqalaha doorashada goobaha noqonaya waa inuu noqdo qof hogaamiye ah, sida daradeed waa in aanuu noqdo qof isagu is diri kara, oo had iyo jeer sugin in wax loo sheego. Waa inuu noqdo qof go’aan qadan kara, oo hogaamiye ah. Goob-kasta oo doorasho ka dhacaysay waxaa jooga afar (4) qof oo komishanka qaranka ka wakiila, kuwan oo kala ah: Gudoomiye, Gudoomiye ku-xigee iyo Xoog-haye iyo hubiye. Gudoomiye, Gudoomiye ku-xigee waa labada qof ee goobta lagu codaynayo ka masuulka ah, sida daradeed, waa in ay noqdo dad hogaamiyeyaala, oo xali kara arin kasta oo la soo wajahda.
Teeda kale, shaqalaha doorashadu waa in ay wax ka bartaan kuwii ka horeeyay, kagana daydaan hawsha fiican ay qabteen. Caqabadaha kuwii ka horeeyay ka hor yimadan la baro sida u xali lahaayeen.
Haddaba, markay casharadani dhamastan waa in imtixaan laga qaado, kuwa ka gudba la siiyo shahadad cadaynaysa in ay diyaar u yahay in ay shaqalaha doorashada qaban karaan. Komishanka qaranku, marka ay shaqalo doonayaan iyaga ka qortan. Teeda kale, waxaa jira dad badan oo shaqalaha doorashada hore u noqday, kuwaasi oo hasta wayo aragnimo ay hawshan ku qaban karaan. Marka waa in iyaga mudnaanta la siiyo.
Marka ay doorashadu dhamato waa shaqalaha hawsha si fiican u guta Shahado sharaf iyo ‘recommendation letter’ (warqad sharaf) la siiyo. Si marka ay shaqo dawladeed ama shaqo kale doontan shahado sharafta iyo warda sharafta ugu noqoto mid loo tixgaliyo.
3) Muraaqibiinta Xusbiyada
Muraqibiinta xusbiyada qaarkood waxay iyaguna u badnaaye dhalin-yaro xusbiga iyo musharaxa tone dacad u ahayn, lakiin gunada la siinayo muraqibiinta soo doontay.
Sida daraadeed, muraqibiinta qaar ayaa ku mashquul sanaa telefoonada, oon danaynaynin hawsha loo diray. Dadkeena in badan ayaan waxna qorin waxna akhriyin, oo marka ay codaynayaan u bahan in la cawiyo. Haddaba, marka ay soo galan goobta lagu codaynayo waxay codsadan in loo calamadiyo musharaca ay u-codaynayaan. Gudoomiyaha goobta ee Komishanka Qaranka ka wakiilka ah ayaa u calaamadeeya musharaxa ay rabaan. Sida daradeed, muraaqibka xusbiyadu waa in ay hubiyan inuu u calaamadeeyay musharaxa dalbaday. Haddii aanu muraqibka xusbiga aanu soo jeedin, marka Gudoomiyaha goobta ayaa cida isagu rabo ayuu codka siinayaa.
Haddaba, Qofka muraqib xusbi u-noqonayaa waa inuu marka hore xubin ka ahaado xusbiga, marka xiga waa in xusbiga shaqada u diranayaa ay siiyan casharo la mida kuwa muraaqibiinta komishanku qaatan. Teeda kale, waa in ay qortaan muraqibiintii hore u shaqeeyay ee wayo araganima leh.
Doorashada Golaha Wakiilada iyo Golaha Deganka waxa isa soo sharaxaya musharaxiin badan. Musharax kastaba waxaa doonaya inuu helo muraaqibiin u ilaaliya codadkiisa. Marka, caqabad noqon mayso in la helo muraaqibiin dacad ah oo musharaxooda u ilaalinaya codadka, lakiin waxaa dhici doonta in musharax kasta uu doono in muraaqibiin u dacadi ay joogan goobta uu ka sharaxan yahay. Marka sida loo kala hori lahaa ayaa laga yaaba in ay dhib noqoto.
4) Cadaynta Muwadinka (IRIS BIOMETRIC)
Sida aynu la wada socono waxa dalka laga hirgaliya qalab casriya oo la yira IRIS (IRIS BIOMETRIC), qalabkani oo dadka is-diiwan galinayay isha ka sawirayay. Sidoo kale dadka is-diiwan galiyay waxa laga qaaday faraha.
Dadka qaar ayaa ku dooday in goob kasta la dhigo qalabkani indhaha akhriya (IRIS scanner), si loo hubiyo qofku codaynaya. Haddaba, gobaha doorashada madaxwaynuhu waxaay ahaayeen 1642 goobad, oo meelkasta boqolaal qof ka codaynayeen. Marka in goobkasta computer iyo qalabkani indhaha akhriya (IRIS scanner) la dhigo, way fiicnaan lahayd. Haddii qiimo jaban lagu helayo qalabkani indhaha akhriyaya (ama IRIS scanner), waxaan qabaa in uu noqon karo maal-galin fiican oo ka hor tagi kara in doorasho danbe laga murmo.
Haddii aynaan awoodi karin in goob kasta la dhigno qalabka indha akhriyay, marka waa in la hubiyo kadhka codaynta ee qofka codaynaya sitaa inuu yahay kiisi, isla markana aanu foorjari (forgery) ahayn. Laba mid ayaa laga yaba inuu qofku si sharci daro ah ku codayn karo:
i) Haddii, uu qofku soo qato kadhka codaynta, oo qofkale leeyahay (sawirkana isku eeg yihiin), isla markana shaqaalaha goobtu ayna si fiican u hubin.
ii) Ama waa haddii, uu qofku samaysto kadh codaynta oon foorjari ah, sawirkiisa ku dhajiyo. magaca uu doonayo inuu isticmaalana uu yahay qofkale goobta uu doonayo ka diiwan gashan.
Haddaba, dhacda kowada (i) way dhici kartaa, in kast oo ayna badnayn, xusbina u gaar ahayn. Xalkuna waxaa uu noqonayaa iyada oo shaqalaha goobta lagu codaynayo iyo muraqib xusbiyada si fiican loo tababaro, lana xusho dad soo jeeda oo qofka hubinaya inuu sito Kadh codayna uu isagu leeyahay.
Dhacdada labaad (ii) doorashadii Madaxwaynaha may dhicin, lakiin doorashooyinka danbe waa la isku dayi karaa. Haddaba, haddii aynu doonayno in la xaqiijiyo in kadhka codaynta (ID-ga) aanu foorjari ahyn. Waxaa la heli karaa qalab lagu hubin karo kadhka codaynta, oo goob kasta la dhigi karo, isla markana sidaa qalabkani u ahayn.
Haddii dhaqaalo loo heli karo waxaa fiican in aynu isticmaalno CCTV (Close Circuit TV) oo ‘wireless’ ah. Qiimahoodu qaali ma ah, meelkastana lama dhigayo ee meelaha dad badani ka codaynayaan ayaa lagu xidhayaa. Qalabkani waxaa uu lagu hubinayaa in qofka codaynayaa uu sito Kadhka Codaynta oo uu leeyahay, dadka goobta ka shaqaynayaana ay hawshooda qabanayaan. Sideedaba, qofku marka uu ogyahay in video laga duubayo, inuu hawsha sagsago lagama yaabo, qofka codaynayaana lagama yaabo inuu isku dayo inuu ku codeeyo Kadhka oo aanu lahayn.
5) Hoyga iyo cuntada shaqalaha doorashada (Accommodation)
Shaqalaha doorshada goobaha lagu codaynaya ka hawl gala, waxaanay ka yimada gobalo kala fog fog, safaro dhaa-dheerna way soo galaan. Maalinta doorashada waxaa shaqeeyan wakhti aad u dheer. Doorashada waxay bilaaban 6:00 Am ilaa 6:00 Pm, ugu yaran 4 sacadoodna waxay tiriyaan waraqaha lagu codeeyay, marka ugu yaran waxay shaqeeyan 16 sacadood.
Haddaba, markaad eegtid shaqada qabtaan maalinta iyo safarka dheer ay soo galan. Waa in la daryeelo muda ay safarka ku jiran iyo maalinta ay hawsha doorashada socoto.
Shaqalaha doorashadu waa in maalmaha doorashadu socdaan ka warwarin hoy ay seexdan. Sida daraadeed waa in maalinta doorashada maalinta ka horaysa ay gaadhan meesha ay ka hawl galayaan, hoyga iyo cunta ay cunayaan diyaar u yihiin.
Meelaha laga codaynayo waxaa laga yaaba in ay yihiin miyi, meel aan lahayn hoy la seexdo iyo maqaaxiyo wax laga cuno. Haddab, haddii ayna meesha tuulo u dhawn waa in cunto (la qaadan karo), taanbuug iyo furaashyo lagu seexdo haystaa. For example; camping supplies, such as tent, sleeping bags & dry food.
Gababa gabadii, waxaan marka hore u hanbalyaynayaa Komishanka qaranka Somaliland oo qabtay shaqo aad u fiican, waxaanay inaga mudan yihiin sharaf iyo in la ciseeyo. Waa in aanu ka faa’iidaysano wayo aragnimada ka heleen labadii doorashe eey qabteen. Sida daraadeed, aan la kala dirin. Iyagana waxaanse u soo jeedin lahaa in ay ka faa’iidaysanayaaan talooyinka wax ku oolka ah ee loo soo jeediyo. Dhamaanteen waxaa inoo dana in ay doorashooyinku noqdan kuwa xor ah oo xalaala oo aynaa isku qab qabsan.